Ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ Suede, ndị na -ebubata ya - ndị na -emepụta China Suede Akpụkpọ anụ
Black Microfiber Suede Akpụkpọ anụ maka ụgbọ ala
Ibu dị nfe, 30% dị mfe karịa akpụkpọ anụ, na -emezu ihe achọrọ maka ịdị arọ dị arọ yana akụ na ụba mmanụ.
Black Microfiber Suede Akpụkpọ anụ na -ere ọkụ maka Wheel Steering Car
Microfiber suede akpụkpọ anụ na-ejikọ uru akpụkpọ anụ na akwa, na-atụgharị echiche ọdịnala na akpụkpọ anụ dị elu karịa ihe niile dị n'uche ndị na-azụ ahịa, na-atụgharịgharị akwa sịntetị, na-eweta ọnọdụ ọhụrụ maka ịdị elu, ndụ gburugburu ebe obibi.
Ezigbo akwa akwa suede mitomie akpụkpọ anụ microfiber maka akpaaka
Ihe mejupụtara microfiber suede bụ polyamide, nke bụ naanị otu puku n'ime dayameta nke ntutu. Bensen na -eji usoro a iji hụ na nkasi obi na ịdị nro nke suede.
Akpụkpọ anụ Microfiber Suede maka mkpuchi oche ụgbọ ala na ime ụlọ
Microfiber polyester nke Bensen mepụtara nwere mmetụta yiri nke akpụkpọ anụ dara, mana ọ bụghị ezigbo akpụkpọ anụ, mana akpụkpọ anụ sịntetik microfiber.
Microfiber Suede Eco Sịntetik Akpụkpọ anụ maka ime ụgbọ ala
Microfiber suede nke Bensen mepụtara enweghị DMF na ule gburugburu. Ọ bụ nke ngwaahịa dabere na mmiri zuru oke, ọ nweghị mmerụ ọ bụla na ahụike mmadụ, enweghị mmetọ na gburugburu ebe obibi.
Akpụkpọ anụ Suede kacha mma maka ịchọ mma n'ime ụgbọ ala
Akpụkpọ anụ Microsuede nwere ọtụtụ uru, dị ka ịdị nro dị mma, ụdị mara mma, agba zuru oke, nguzogide na -adigide/abrasion, dị mfe ilekọta, wdg akpụkpọ anụ Suede nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uru niile nke akpụkpọ anụ na akwa.
Microfiber Suede Akpụkpọ anụ dị nro na nke na -adịgide adịgide maka ime ụlọ
Akpụkpọ anụ microfiber suede bụ ngwaahịa dị oke mma n'ozuzu ya, mana ọ bụghị maka otu ihe kpatara ụdị akpụkpọ anụ ndị ọzọ. Ma ọ bụ ịdị nro na ịdị mfe nke a na -eji kpọrọ ihe.
Hydrolysis na -eguzogide mmiri Waterproof Suede Pu Sịntetik Microfiber Akpụkpọ anụ
Mgbanwe nke Alcantara nwere plastik mara mma ma enwere ike ịme ya: wiilị ụkwụ: a na -ekechi steepụ Huracan na nnọchi Alcantara n'akụkụ abụọ iji meziwanye mmetụta na ịbawanye esemokwu, ogwe ime, oche, mkpuchi (akpa akpụkpọ anụ, ihe mkpuchi igbe ga -ejikwa. Alcantara), ngwaọrụ elektrọnik, (akụkụ igodo Surface Pro 4 na -eji ihe nnọchi Alcantara)
Red Microfiber Suede Sịntetik Ewu Imitomi Suede Cars Akpụkpọ anụ
Microfiber dayameta pere mpe, yabụ isi ike ya na -ehulata pere mpe, eriri na -adị nro nke ukwuu.
Ezigbo mma Suede Fabric Pu Microfiber Akpụkpọ anụ
Ejiri microfiber mee suede ma nwee elu dị nro.
Eco-Enyi na Enyi Automotive Microfiber Suede Akpụkpọ anụ maka oche
Ngwa ụlọ dị n'ime ụgbọ ala nwere ihe ndị ọzọ siri ike n'ihe gbasara mgbochi mgbochi, ire ọkụ, mgbochi static, anwụ anwụ na-eguzogide, dị mfe nhicha, wdg na oche, steering wheel na akụkụ ndị ọzọ na-emetụta ahụ mmadụ chọrọ nkasi obi na ịma mma na anwụ ngwa ngwa.
0.7 - 0.8mm Ọdịdị Akpụkpọ anụ ụlọ dị n'ime ụlọ
Bensen bụ ụlọ ọrụ na-emepụta faux suede nke nwere ihu igwe nwere ike ịnye ụdị na agba dị iche iche nke faux suede. Tụnyere ezigbo akpụkpọ anụ, faux suede nwere nguzogide abrasion ka mma, nguzogide mmiri, nguzogide ntụpọ na ikuku ikuku. Ọ bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma maka ịchọ ụgbọ ala gị.